देशभरिमा थप २१० जनामा कोरोना सङ्क्रमित, १४६ जना निको — onlinedabali.com
देशभरिमा थप २१० जनामा कोरोना सङ्क्रमित, १४६ जना निको
डबली संवाददाता २०७७ साउन १४ गते
काठमान्डौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित बिफिङमा बोल्दै प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार देशभरिमा थप २१० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि बताएका छन । आज सङ्क्रमण पुष्टि भए सँगै हालसम्म नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १९,२७३ पुगेको छ भने अहिलेसम्म ४९ जनाको ज्यान गईसकेको छ ।
त्यस्तै बुधवार उपत्यकाका तीन जिल्लामा १५ जना र मङ्गलवार ५३ जना नयाँ सङ्क्रमित देखिएको थियो । उपत्यकामा हालसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टी भएकाहरुको सङ्ख्या ४८९ जना पुगेको छ । काठमाण्डूमा सङ्क्रमित हुनेहरूमा दुई भारतीय र एक चिनियाँ नागरिक सहित ३४९ जना, ललितपुरमा ८९ जना र भक्तपुरमा ५१ जना छन ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा उपत्यकामा परीक्षण बढाएसँगै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बढिरहेको प्रबक्ता र गौतमले बताउनु भयो । अहिले देशभरमा सक्रिय सङ्क्रमण भएका कुल ५,२०३ व्यक्ति देशभरि आइसोलेशनमा छन । सङ्क्रमितको सङ्ख्या सँगै निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । विगत २४ घण्टामा १४६ जना निको भएसँगै अहिलेसम्म १४,०२१ जना रोगमुक्त भएका छन्।
त्यस्तै नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायलेका अनुसार पर्साको वीरगञ्जमा सेना, प्रहरी, कारागार कर्मचारी र कैदीबन्दी गरी थप ३४ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
नयाँ पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू दुई वर्षको बालकसहित पाँच जना बालबालिका र १० जना महिला रहेको उनले बताए।
सवास्थ्यकर्मीमा समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । नेपालमा विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ६,०३७ वटा परीक्षण भएकोे छ । कुल पीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या ३५८,३४४ रहेको छ । अहिले देशभरिका क्वारन्टीनमा १४,४७१ जना छन ्।
प्छिल्ला दिनहरुमा स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गराएका व्यक्तिमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । अस्पताल सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।